Sida Loo Sameeyo Qulqulka Cilladaha Naafada ee Hoose ee Kalooriyeyaasha - Hagaajinta Caafimaadkaaga - WAA KU SAMEEYAAN AMAANAHA
ACCUEIL » rasiidhada »Sida Loo Sameeyo Qulqulka yar yar ee Caarada Kalluumeysiga ah - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Sida Loo Sameeyo Qulqulka Qulqul hooseeya ee Kalooriya - Kordhinta Caafimaadkaaga
TELES RELAY 7 August 2019
Ma jeclaan lahayd inaad diyaarisid macmacaan aan sonkor lahayn? Waxaannu idin kula wadaagi doonnaa sida ugu dhakhsaha badan tallaabo tallaabo ee lagu sameeyo karbooni yar yar oo aan lahayn sonkor. Sidee ku saabsan iskuday?
Xaraashku waa macmacaan ay adag tahay in la iska caabbiyo. Xaqiiqdii, waa jecel yahay qof walba, yar iyo weyn. Warka ugu fiican? Waan sharixi doonaa sida aad ugu diyaarin karto sonkor la'aan si aad u yareysid sonkorta ku jirta. Waxaad arki doontaa inay u macaan tahay flan-ka ayeeyooyinka ayeeyadeed.
Cunto kariska Napolitan Light
Xannaaneeyaha 'Nepolitan' waxaa lagu kala gartaa inuu muuqaalkiisu xun yahay. Jidhkeeda jilicsan ayaa dhalaali doonta macmacaanka afka wuxuuna kugu casuumay inaad wax badan cunto. uu diyaarinta wuu ka sahlan yahay sidaad u malaynayso. Waxaad arki doontaa in daqiiqado gudahood aad ku heleyso macaan macaan oo aad ka yaabiso qoyska oo dhan.
Sida guryaha ay nafaqada u leeyihiin, Saldhigga waardiyaha waxaa laga sameeyay caano iyo ukun. Xaaladdan oo kale, waxaan doorannay caano baraf ah maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan diyaarinno a macmacaanka kaloori yar.
Waa muhiim in la xuso taas in kastoo Caanaha loo yaqaan 'skim milk' waxay hodan ku yihiin kaalshiyamka iyo iodine-ka waxayna sii wadaan isku mid ah lactose iyo sokorta sida caanaha oo dhan, waxay lumisaa fiitamiinnada A iyo D inta lagu gudajiro hawsha ka saarista dufanka. Haddii aad rabto in flankaagu ka kooban yahay fiitamiinadan, isticmaal caano dhan.
Ukuntu, dhinaca kale, waxay leeyihiin qiime nafaqo oo sareeya oo ay kujirto waxyaabo aad u sarreeya oo ah borotiin tayo sare leh iyo ashitada dufanka badan. Waxay sidoo kale bixiyaan fitamiinada A, B (B2, 3, 12 iyo folate), fosfooraska, iodine iyo selenium.
Ugu dambayntii, waxaan go'aansanay inaan isticmaalno ricotta halkii laga isticmaali lahaa caano ku habboon iyo stevia halkii sonkorta lagu isticmaali lahaa, si loo yareeyo qaadashada kalooriga oo laga dhigo macmacaan ku habboon sonkorowga qaba. Dabcan, haddii aad rabto, waxaad ku beddeli kartaa stevia sonkor.
Ha seegin: Diyaarso mousse shukulaato macaan leh oo lagu kariyo cuntadan lagu kariyo guriga
Waxyaabaha ay ka kooban tahay dadka 10
Koobabka 2 iyo 1 / 2 skim milk
Koobka 1 1 / 4 ee ricotta
Budada budada ah ee loo yaqaan '1 qaado' stevia budada
Qaadashada xNUMX qaado vanilj
Buufin saliidda qudaarta ah (hadba sida loogu baahdo)
Waxyaabaha ay ka kooban tahay karam
50 g suuxlose budada
3 miisaan biyo ah
Istaroog casiir liin ah
Si aad u akhrido sidoo kale: Cake Madeeyo: macmacaanka caafimaadka leh ee cuntadaada
Diyaarinta nambarka Nubapolitan
Kululee foornada ilaa 200 ºC.
Ku qas caano isku dar ah, jiiska iyo ulaha kuleylka leh blender.
Markaad hesho isku-dar ah, ku dar waxyaabaha 'vanilla' ka samee oo mar labaad garaac. Book.
Diyaarso karamikada. Si tan loo sameeyo, digsi kuleyl yar oo ku dar sucralose. Walaaq ilaa ay ka beddeleyso midab (dhalaal). Dami kuleylka oo ku dar biyaha iyo casiirka liin si joogto ah u kareyso.
Ku buufin xaashiyaha flan ee leh saliidda cuntada lagu buufiyo.
Ku shub karamalka iyo isku dhafka Neapolitan flan.
Ku dabool foornada aluminiumka waxaadna ku dubtaa biin-marie. Dhig barkad biyo ah si aad ugu daboosho 1 / 3 caaryadaada oo ku dhex dhig gudaha.
Isku kari ilaa hal saac 180 ºC. Hubi in biyuhu aan si buuxda u nuugin. Haddii ay sidaas tahay, ku dar biyo badan.
Garaac garabka oo haddii mindiisu ka soo baxdo nadiif, waxay ka dhigan tahay inuu diyaar yahay. U oggolow qabow in aan laxoogin dhibaato la'aan.
Fikradaha inay ku kala duwan yihiin
aad awoodid isticmaalka caan badana halkii caano skim. Qiyaasta waa inay ahaato isku mid.
Ku qurxin khudaartaaga nooc kasta oo miro ah: isteroberi, jeeriga, miraha guduudan ... wax alla waxaad rabto!
Haddii aad jeceshahay dulce de leche, iskuday inaad milix ku shubtid miiskaaga!
aad awoodid ku beddelo ricotta caano leh qabowlaakiin waxaad kordhin doontaa qiimaha kalooriga maxaa yeelay xaddi badan oo sonkor ah.
Maxaad u maleyneysaa sida loo karinayo cuntada loo yaqaan 'Neapolitan Consard'? Ha ka shakinin inaad u diyaariso, waxaan hubnaa inay ku farxi doonto dhalinyarada iyo dadka da'da ah maxaa yeelay si fudud waa macaan!
Qoyaan Coconut oo aan lahayn sokor iyo caano la'aan
Qumbaha qumbaha ee aan sonkorta lahayn iyo caano la'aan waa macmacaan macaan oo caafimaad leh. Baro maqaalkan si aad isugu diyaariso oo aad ugu raaxaysato! Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/comment-faire-un-flan-napolitain-pauvre-en-calories/
Chickpea hummus leh paprika
Ogow Waxa ay Khubaradu ka odhanayaan Tusaalayaasha Dib-u-eegista Suugaanta - Hagaajinta Caafimaadkaaga